Microsoft na-eweputa Mepụta Laptọọpụ na-enweghị USB C na sistemụ arụmọrụ Windows S | Esi m mac
Microsoft na-ewebata Laptọọpụ n’elu na enweghị USB C na sistemụ arụmọrụ Windows
Ndị nke Redmond gosipụtarala laptọọpụ Microsoft Microsoft ọhụrụ, a obere na ìhè kọmputa na Aims na-ebili ka Apple lightest MacBooks, ma tumadi anyị na-ahụ ya ọzọ nke a siri ike nke Chromebook. N'echiche a, anyị ga-ahụ karịa ọnụọgụ na, dị ka anyị na-ekwu mgbe niile, ahụmịhe onye ọrụ bụ ihe na - eme ọdịiche dị n'etiti otu na nke ọzọ, na mgbakwunye na usoro okike nke onye ọrụ na - agagharị, ebe ọ bụrụ na ha nwere iPhone na ihe iPad, ọ bụ ihe nkịtị ịdọrọ kwupụta Apple ngwaahịa.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na anyị lelee atụmatụ nke laptọọpụ ọhụrụ Microsoft nke ọhụụ anyị ga-ahụ na ọrụ ahụ dị mma, ihuenyo 13,5-inch ya 3: 2 akụkụ ruru na PixelSense teknụzụ na-ekwe ka aka na mkpịsị nkwado agbakwunyere ihe jikoro 14,47 mm na akụkụ kachasị oke ma gbanwee ogo ruo mgbe ọ ga-enweta 1,25kg ibu, mee ya onye iro di ike.
N'ezie, na mgbakwunye na imewe ahụ anyị ga-eleba anya n'ime akụrụngwa yana ọ naghị emechu ihu. Anyị nwere XNUMXth ọgbọ Kaby Lake processors dị, Intel Core i5 na i7, 4 GB nke Ram na 128 GB ikike SSD maka isi ihe nlereanya na nnwere onwe dika Microsoft si rue 14 na ọkara awa anyị ga-ahụ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ i7 anyị nwere ike ịhọrọ 1 TB nke ikike na 16 GB nke ebe nchekwa mana ọnụahịa ahụ na-agbapụkwa ntakịrị.
Mana ọ bụrụ na enwere ihe na-ezighi ezi na akụrụngwa a, ọ bụghị atụmatụ ahụ ma ọ bụ nkọwa ya, Ọ bụ sistemụ agbakwunyere Windows 10 S maka ngwa ọnụahịa dị oke-elu ma karịa njikọta niile na ọdụ ụgbọ mmiri. Kedu ihe Microsoft gafere n'uche ya site na ịhapụ kọmputa ndị a na-enweghị ọdụ ụgbọ USB Type C? Anyị nwere ọdụ ụgbọ mmiri USB ma ọ nweghị otu ọdụ ụgbọ USB USB. Ọ bụrụ na ị gbakwunye DisplayPort na njikọ njikọ ikike ya na ngwaọrụ nwere aha Elu.
Mkpebi ịghara itinye eriri USB C ma ghara ịgbakwunye nsụgharị ọrụ nke Windows 10 bụ ederede na-adịghị mma. Banyere ọnụahịa na nnweta akụrụngwa ahụ, ekwesịrị ikwu na nke ahụ na-esote June 15 ga-ere na United States na a isi price nke $ 999.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Microsoft na-ewebata Laptọọpụ n’elu na enweghị USB C na sistemụ arụmọrụ Windows
Ogbo 22 dijo
Ọ dị m ka ọ gaghị enwe ihe ịga nke ọma ... Echere m na ọ ga-asọmpi karịa na chromebooks karịa Macs.Ọ dịtụla ihe mmechuihu, n'ezie ...
Ihe anyi ga - eji Touch Bar mee n’ime mmemme Evernote
A na-emelite Airmail 3 na-agbakwunye ọrụ ọhụrụ